WatchSmith, chirongwa chinogadzira zvinesimba matambudziko paApple Watch | Ndinobva mac
WatchSmith, chirongwa chinogadzira zvinesimba matambudziko paApple Watch
Kana ndiri akatendeseka, chimwe chezvinhu chandinonyanya kufarira nezveApple Watch kugona kuona ruzivo rwakawanda pachiratidziri. Iwo matambudziko anogona kugadziriswa nemushandisi uye osarudza simba ripi mune yega yega, anoshanda zvakanyanya kudzivirira kuti ave kufamba zvakanyanya kuburikidza nemawachi ekushandisa. WatchSmith inoenderera mberi zvishoma nematambudziko aya uye anoda kuvasimbisa, ndiko kuti, kuti vanochinja zuva rese zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
WatchSmith ichachinja izvo zvinoratidzwa paApple Watch, sezvaidikanwa nemushandisi
Ichi chishandiso chakanangidzirwa kuApple Watch, inovimbisa kuti ruzivo runoonekwa pachiratidziro chewatch, mune izvo zvinonzi zvinetso, chinja zuva rese, seyakagadziridzwa nemushandisi. Musiki wechishamiso ichi ndiye mumwechete akasika Kurara ++ uye kuti nhasi ndiyo chete yakanakira kunyorera kweApple Watch, inoongorora kurara.
WatchSmith pinobvumira kugadzirisa zvinopfuura gumi nemaviri zvematambudziko pane wachi uye izvo zvinogona kuchinja zuva rese. UyeNdicho chinhu chepedyo kwazvo kugona kugadzira ako ega maziso ekuona, chimwe chinhu Apple chaicho chaisingatenderi iwe kuti uite Iko kugona kwekushandisa ndechekuti iwe unogona kushandura kuomarara awa imwe neimwe (kusvika makumi maviri nemana pazuva). Iyo inokutendera iwe kugovera akasiyana matambudziko kune chaiwo nguva dzezuva, nemitemo yakatsanangurwa kare.
Nenzira iyi iwe unogona kuronga kuti ajenda, semuenzaniso, inomira kuratidza kana bhizinesi maawa apera uye iyo yekuita mitambo inogoneswa. Kune akawanda anogona kusangana.
Pamwechete, iko kunyorera kuri mahara asi haugone kuwana zvese zvinoshanda. Kana iwe uchida kuvhura ese awo uchafanira kunyorera mumutengo wemitengo unobva pa € ​​2 kusvika ku € 22. Edza uye kana uchida zvainokupa, unogona kuvhura zvinhu sezvaunenge uchida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchSmith, chirongwa chinogadzira zvinesimba matambudziko paApple Watch
€ 2 pamwedzi kana € 22 pagore kuti vagadzirise mamiriro ekunze… vari kuenda kuidya nemapatata.
Dzimwe nyika dzinorambidza vakuru vadzo kushandisa Zoom
HBO haizotsigire 3rd Generation Apple TV